'बेपत्ताकी आमा' को घरमा दसैं- वागमती - कान्तिपुर समाचार
'बेपत्ताकी आमा' को घरमा दसैं
आश्विन १८, २०७६ प्रताप विष्ट
हेटौंडा — दसैंमा नयाँ लुगा, मासु र चामलको व्यवस्था कसरी गर्ने होला भनेर बुधबार बेलुका नातिनीसँग गुनगुनाएर सुतेकी थिइन् शुभद्र दर्नाल । बिहीबार बिहान छाप्रो अगाडिको सानो पिँढी खरेटोले बढारिरहेको अवस्थामा घर अगाडि गाडीसहित ओर्लेपछि बढार्न छाडेर एकपटक लगाएर हेरिन् ।
गाडीबाट ओर्लेका हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतसहितका मानिसले नमस्ते आमा भनेपछि उनले पनि दुई हातै जोडेर सुस्त स्वरमा नमस्ते भनिन् ।
दसैंमा खानका लागि खाद्यान्न एवं लगाउनका लागि नातिनीसहित हजुरआमालाई लुगा र मासु खान पैसा ल्याइदिएका छौं लिनोस् भनेर मेहर महतले हातमा दिन लाग्दा वृद्धा दर्नालको हात कामेको थियो । तर पनि उनले समात्दै भनिन्, ‘कहाँबाट ल्याइदिनु भो, दसैं कसरी मान्ने होला भनेर नातिनीसँग हिजो बेलुका कुरा मात्र गरेको थिए । आज घरमा नै दसैं आइपुग्यो धन्य हुँदो रहेछ मेयर साहेब ।' १८ वर्षीया नातिनीको अनुहार पनि दसैंका लागि लुगा, खाद्यान्न र मासु खान पैसा पाउदा उज्यालो देखिएको थियो । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति आफ्ना चारवटा छोरा बेपत्ता भएपछि टुहुरी नातिनीलाई हुर्काएर हेटौंडा उपमहानगरपालिका–९ शान्तिनगरको सुकुम्बासी टोलमा कष्टकर जीवन बिताउँदै आएकी ७० वर्षीया दर्नालको अवस्था बुझ्न मेयर हरिबहादुर महत एक साताअघि गएका थिए ।
गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन कान्तिपुरमा पहिलो पृष्ठमा शुभद्रा दर्नालको बारेमा लेखिएको थियो । उक्त समाचार त्यति नै बेला पढेका मेयर महतले समयको अभावले गर्दा एक साताअघि मात्र शान्तिनगर सुकुम्बासी टोल पुगेर उनको अवस्था बुझेका थिए । बिहान–बेलुका हातमुख जोर्न पनि समस्या रहेको मात्र होइन, घामपानी दुवै छिर्ने टहरोमा बस्दै आएकी वृद्धा दर्नालसहित स्थानीयबासीको माझमा मेयर महतले दसैंपछि जस्तापाताको छाना भएको पक्की घर उपमहानगरपालिकाले बनाइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर । उनको प्रतिबद्धता भुइँमा खस्न नपाउँदै वृद्धा दर्नालले दुई हात जोडेर भनिन्, ‘पक्की घरमा मजस्ता सन्तान गुमाएको गरिबले पनि बस्न पाउलान् हजुर ।' मेयर महतले पाउनुहुन्छ, ढुक्क हुनुहोस् भनेर आश्वस्त पार्न खोज्दा दर्नालका दुवै आँखाबाट आँसु झरेका थिए । रक्तअल्पता र दमको रोगले उनलाई च्यापेको छ । गरिबीको कारणले नातिनीले पढाइलाई निरन्तरता दिन सकेकी छैनन् ।
अहिलेसम्म पनि उनीहरूको अत्तोपत्तो छैन । मुलुक परिवर्तनका लागि चार छोरा गुमाएकी शुभद्रासँग अहिले बेपत्ता पारिएका कान्छो छोराको छोरी अस्मिसा छिन् । बाबुलाई सुरक्षाफौजले पक्राउ गर्दा उनी एक वर्षकी मात्र थिइन् । ‘उनी जस्ता आमाहरूले जन्माएका छोराछोरीले बलिदान नदिएको भए मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव थिएन,' मेयर महतले भने, ‘हामीले यस्ता आमाबाबुहरूलाई आदर सम्मान र माया गर्नुपर्छ ।'
प्रकाशित : आश्विन १८, २०७६ ०८:१३
आश्विन १८, २०७६ रमेश के.सी.
सन् १९७२ मा बेइजिङमा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको भ्रमणका बेला चिनियाँ प्रधानन्त्री चाउएनलाईलाई हेनरी किसिन्जरले भनेका थिए, ‘तपाईको देश मलाई एकदम रहस्यमय लाग्छ ।’ जवाफमा चाउएनलाईले भने, ‘महोदय, बाहिरबाट हेर्दा रहस्यमय लागेको हो र तर भित्रबाट केही पनि रहस्य छैन ।’
त्यही रहस्यमय चीनलाई अहिले संसारभरका विद्वान र पत्रकार ‘डिकोडिङ’ गर्न लागेका छन् । चीनको अभूतपूर्व उदय पछाडिका कारणहरू खोतल्न लागिपरेका छन् । ५ हजार वर्षको लिखित इतिहास अझै कायम राखेको चीनको मौलिक चिन्तन, राजनीति र रणनीति रहस्यमय नै छ । यसको धर्म र संस्कृतिलाई पश्चिमाहरूले पूर्वीय रहस्यवादको रूपमा लिए । करिब २४ सय पहिलेकै सनजुको एउटा पुस्तक ‘दि आर्ट अफ वार’ले समकालीन चीनको रणनीतिक मस्तिष्क बुझ्न मद्दत गर्छ । यस पुस्तकका सन्देशहरू चिनियाँ सैनिक नेताहरू, विदेश मामिलाका सञ्चालकहरू, व्यापारिक नेताहरू मात्र नभई खेलकुद क्षेत्रका हस्तीहरूका लागि मार्गनिर्देशक बनेका छन् ।
आखिर २४ सय वर्षअघि लेखिएको यस पुस्तकमा के छ ? जसले चिनियाँ राज्य सञ्चालकहरूलाई प्रेरणा दिन्छ । विशेष गरेर सैन्यकलामा लागू हुने यो पुस्तकलाई भियतनाम युद्धताका त्यहाँका कम्युनिष्टहरूले विशाल र प्रविधियुक्त अमेरिकी सेनालाई पराजित गर्न लागू गरेका थिए भने दोस्रो विश्वयुद्धताका पनि यसका सिद्धान्तहरूको लागू भएका थिए । ‘बलियो पक्षलाई बेवास्ता गर, कमजोर पक्षलाई आक्रमण गर । यदि तिमी आफ्नो शत्रुलाई राम्ररी चिन्छौ भने हजार युद्धहरू जित्न सक्छौ र सबैभन्दा राम्रो त त्यो हो, यदि तिमी लडाइँ नलडी युद्ध जित्छौ ।’ यस्ता सन्देशहरू भएको तीन भागमा विभाजित यो पुस्तक चिनियाँ सैन्यकला कौशलको आधार हो ।
‘सबै युद्ध छलमा आधारित हुन्छ’ भन्ने यस पुस्तकलाई सैन्य रणनीतिको सम्पूर्ण र विवेकपूर्ण कृति मानिन्छ । सनजुले प्राचीन कालमा छरिएका झगडालु राज्यहरू बीचको युद्धमा ऊ राज्यको सल्लाहकार भएर आफूभन्दा विशाल र धेरै शक्तिशाली चु राज्यलाई पराजित गरेका थिए । जसले गर्दा त्यसबेला ऊ राज्य धेरै शक्तिशाली भएको थियो । धेरै युद्धहरूमा सहभागी सनजुले आफ्ना अनुभवहरूलाई पुस्तकमा लेखेका हुन् । कतिले यसलाई धेरै सैनिक नेताहरूको अनुभवको निचोड रहेको तर नाम भने सनजुको दिइएको पनि बताएका छन् । ‘विपक्षीलाई सेनाले होइन, विवेकले पराजित गर’ भन्ने सनजु युद्धलाई जीवन र मरणको प्रश्न ठान्छन् । अझ उनी अगाडि भन्छन्, ‘तिम्रा योजना रातजस्तै अँध्यारो हुनुपर्छ । तर आक्रमण गर्दा चम्कनुपर्छ । पराजित सेनाले पहिले युद्ध गर्छ, पछाडिमात्र विजय खोज्छ । तर विजेता सेनाले पहिले मनोवैज्ञानिक रूपमा जित्छ र पछि युद्ध गर्छ ।’
सनजु लडाइँका लागि मौसम, भूगोल, नेतृत्व र नैतिक सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन् । उनले लडाइँमा जर्नेलको भूमिकादेखि सामान्य सिपाहीको दायित्वसम्मको चर्चा गर्दै गुप्तचरहरूको महत्त्वलाई प्रकाश पारेका छन् । एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकमा पढ्दा लाग्छ, त्यतिबेलै सनजु मानव व्यवहार र सामाजिक–राजनीतिक संरचना द्वन्द्वमा आधारित छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए । किनभने मानव चेतना नै द्विविपरीत ध्रुवमा विभाजित छ । जस्तो कि अँध्यारो/उज्यालो, महिला/पुरुष, दिन/रात आदिजस्ता द्वन्द्वको क्रममा उत्पन्न हुने युद्धलाई विवेक सम्मत ढङ्गले निरुपण गर्ने उनको उद्देश्य देखिन्छ । यही विवेकका कारण आज उनको दर्शन चिनियाँ समाजको आद्य स्वरुपमा बसेको छ ।
चिनियाँ क्रान्तिका महानायक माओले पनि क्रान्तिताका युद्धमा जुको सिद्धान्तको प्रयोग गरेका थिए ।
यथार्थ राजनीतिमा आधारित यो सिद्धान्त पश्चिमी रणनीतिक सिद्धान्तभन्दा बेग्लै छ । युरोपेली सैन्य सिद्धान्तकार कार्लभान क्लवित्ज र एन्टोनी हेनरी जोमेनी रणनीतिकारहरू विजयलाई महत्त्वपूर्ण मान्छन् भने सनजु घेराउ, मनोवैज्ञानिक दबाब, वातावरण आदिलाई महत्त्वपूर्ण मान्छन् ।
उनी अरु युद्ध नलडीकनै विजय प्राप्त गर्न उद्देश्य पनि राख्छन् । उनी भन्छन्— ध्वस्त भएको राष्ट्रलाई एउटै बनाउन सकिँदैन, जसरी मरेको मानिसलाई पुनः जीवनमा फर्काउन सकिँदैन । उनको विचार अनुसार भूगोलको विजयभन्दा मनोवैज्ञानिक विजय महत्त्वपूर्ण हो । आज भूगोलभन्दा विज्ञान प्रविधि र सामाजिक मिडियामार्फत मनोवैज्ञानिक युद्ध प्रबल हुँदै गएबाट उनको भविष्यवाणी सही सावित भएको छ । लडाइँमा ऊर्जा माथिबाट तल झर्ने पानीजस्तै हुनुपर्छ, जसका लागि कमाण्डरले आफ्नो शक्तिलाई सही दिशातर्फ रणनीतिक रूपमा मोड्ने कार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आजको विशाल चीनलाई विश्व अवस्थामा हेर्दा सनजु कमाण्डरजस्तै अवस्थामा बसिरहेको आभास मिल्छ । यसर्थ चीनको मौलिक दर्शन ताओवाद कन्फुसियशाली धर्म र बौद्ध समुदायजस्तै यो रहस्यमय र मौलिक रणनीतिक सैन्य सिद्धान्तले उक्त मुलुकलाई सुदूर भविष्यसम्म निर्देश गर्ने छाँट देखिन्छ । सनजुको ‘दि आर्ट अफ वार’ भौतिक अर्थात वस्तुगत अवस्थाको आँकलनमा आधारित प्राचीन द्वन्द्ववादको प्रयोग हो ।
विरोधी पक्षको अस्तित्वलाई स्वीकार्दै त्यसलाई घेर्ने, थकित बनाउने र मनोवैज्ञानिक दबाब दिने र अन्ततोगत्वा विजय हासिल गर्ने उनको सूत्र हो । सनजुले सयौं युद्धहरू देखेका थिए । ती युद्धहरूको शैली र संरचना गरेरै उनले यो पुस्तक लेखेका हुन् । युद्धको सार्वभौम अस्तित्वलाई उनले स्वीकारेका छन् । ती युद्धहरूलाई विवेक सम्मत ढंगले टुङ्गो लगाउनु नै उनको रणनीति हो ।
प्रकाशित : आश्विन १८, २०७६ ०८:१०